राजेश पायल राई, क्यारिकेचर आई गीतलाई बाई बाई ? (भिडियो सहित) « Mazzako Online
राजेश पायल राई, क्यारिकेचर आई गीतलाई बाई बाई ? (भिडियो सहित)
‘राई इज किंग’ अर्थात गायक राजेश पायल राई निकै मिठो गीत गाउछन् । तर, अब उनी हाँस्यब्यंग्यमा पनि आउने हुन की क्या हो ? भन्ने अडकालबाजी सबैले काट्न थालिसकेका छन् । उनले गज्जबको क्यारिकेचर गरेको भिडियो युट्युबमा अपलोड गरिएको छ । राईले क्यारिकेचर गरेर चलचित्र ‘हँसिया’को प्रोमोसन गरिरहेका छन् ।
फिल्म प्रचारको नयाँ नयाँ शैली अपनाई रहेको चलचित्र ‘हँसिया’ले पुन राजेशलाई लिएर अर्को फण्डा गरेको छ । यो फण्डा हेर्दा निकै गज्जबको लाग्छ, किनभने राईले गरेको क्यारिकेचर रमाईलो देखिन्छ । उनले चलचित्रको प्रोमोसन गर्नको लागि नै भनेर कमेडी गरेको सम्भवत यो पहिलो पटक हो ।
गायक राईले विभिन्न नेताहरु देखी लिएर महानायक राजेश हमालसम्मको आवाजको नक्कल गर्ने कोसिस गरेका छन् । स्वं. नेता गिरिजाप्रसाद कोईराला देखि लिएर शेरबहादुर देउवासम्मको आवाजको नक्कल गर्दै चलचित्र हेरिदिन अनुरोध गरेका छन् ।
केही दिन अघिदेखि काठमाण्डौका सडकहरुमा सिंगारिएको टाटा सुमोमा ‘हँसिया’को गीत र ट्रेलर चोक चोकमा देखाईदैछ भने युट्युबाट ‘हँसिया’ प्रोमोसनको लागि गायक राईको क्यारिकेचर पनि रिलिज गरिएको छ । त्यस्तै निर्देशक मिलन चाम्सले महानायकको विहेको मिति गेस गर्नेमध्येबाट सही जवाफ पठाउने एक जनालाई चादीको हँसिया र महानायकसँग डिनर गर्ने अवसर प्रदान गर्ने पनि बताएका छन् । यसको लागि हँसियाको फेसबुक पेजमा गएर कमेन्ट बक्समा हमालको विहे मिति लेख्नुपर्नेहुन्छ ।
दुर्गा घलेले निर्माण गरेको चलचित्र ‘हँसिया’मा नायिका हेमा श्रेष्ठको एक्सनको सबैले प्रशंसा गरेका छन् । यही शुक्रबारबाट अलनेपाल प्रर्दशनमा आउन लागेको चलचित्र ‘हँसिया’मा महानायक राजेश हमाल, हेमा श्रेष्ठ र अनुपबिक्रम शाहीको मुख्य भुमिका रहेको छ ।
चलचित्रले अलनेपाल ६० वटा पर्दा पाएको छ । नयाँ र फरक शैलीको प्रचारमा उत्रिएको हँसियाले कस्तो ब्यापार गर्ने हो त्यो भने चलचित्र प्रर्दशनमा आएपछि नै थाहा होला । अहिलेलाई यति मात्रै भनौ गायक राजेश पायल राईले क्यारिकेचर गरेर अनुरोध गरेको खेर नजाओस् । चलचित्रलाई सफल्ताको शुभकामना ।
राजेश पायल राईले गरेको क्यारिकेचर यस्तो छ ।